Shiinaha soybean peptide warshad iyo alaableyda | Huayan
Waxyaabaha laga helo: Borotiinka soy-aan-gmo ahayn
Midab: Caddaan ama budo huruud khafiif ah
Gobolka: Budada / granule
Nidaamka Teknolojiyada: Enzymatic hydrolysis
Urka: Wax soo saarka ur iyo dhadhan gaar ah
Miisaanka Molecular: 500-1000Dal
Barootiin: ≥ 80%
Waxyaabaha ceyriinka ah ee laga soo saaray dhirta, dabiiciga iyo kululeynta iyada oo aan lagu darin, hodan ku ah noocyo kala duwan oo amino acids ah oo loogu talagalay jirka aadanaha.
Xirmo: 10KG / Bac, 1bag / kartoon, ama loo habeeyay
Soybean peptide waa borotikol yar oo molecule ah oo si fudud u nuugo jidhka bini'aadamka oo ku habboon dhammaan dadka leh dheef-shiid kiimikaad iyo dheef-shiid kiimikaad liita, sida dadka da'da dhexe iyo dadka da'da ah, bukaanka soo-kabashada qalliinka ka dib, buro, shucaac-ku-daaweyn, bukaannada kiimoteraabiga, cilad-darrada caloosha. Intaa waxa u dheer, soy peptide sidoo kale wuxuu leeyahay saameynta hagaajinta difaaca jirka, xoojinta awooda jirka, daalka ka hortagga iyo miisaanka oo luma. Intaa waxaa sii dheer, soy peptide wuxuu leeyahay astaamo farsamo oo wanaagsan sida kala sooc la'aanta borotiinka, kuleylka aan xinjirowga lahayn, biyaha la dhalaali karo, dareeraha wanaagsan, iwm. Waa qayb ka mid ah cunnada caafimaadka u fiican.
1.Anti-gabowga, Anti-daalka iyo xoojinta murqaha;
Heerka kolestaroolka hooseeya iyo yareynta cadaadiska dhiigga;
Wax soo saarka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa cuntada, qurxinta iyo daawada.
1.Shirkaddu waxay si isdaba joog ah u dhaaftay shahaadooyin badan sida ISO45001, IS09001, ISO22000, SGS, HACCP, HALAL, MUI HALAL iyo FDA. Wax soo saarkayagu wuxuu buuxiyaa shuruudaha WHO iyo heerarka qaranka, inta badan loo dhoofiyo Europe, America, Australia, Russia, Japan, South Korea, Singapore, Thailand iyo qaar ka mid ah waddamada iyo gobollada ku yaal Koonfur-bari Aasiya.
Habka tikniyoolajiyada 2.Excellent
Qaado qalab wax soo saar horumarsan iyo teknolojiyad si loo galbiyo soosaarka alaabada heerka koowaad. Khadadka wax soo saarku wuxuu ka kooban yahay nadiifin, hidde-biyood enzymatic, sifeyn iyo fiirsasho, qalajinta lagu buufiyo, baakadaha gudaha iyo dibedda. Isku gudbinta alaabada inta lagu gudajiro wax soo saarka oo dhan waxaa qaada dhuumaha si looga fogaado wasakhda dadka sameysay. Dhammaan qeybaha qalabka iyo tuubooyinka ay la xiriiraan walxaha waxay ka sameysan yihiin bir bir ah, mana jiraan tuubooyin indhoolayaal ah oo dhammaadka dhinacyada ah, taas oo ku habboon nadiifinta iyo jeermiska.
3.Provde waqti-buuxa ah adeegyada iibka kadib.
Waxyaabaha loo yaqaan 'Peptide' Isha laga helo alaabta ceeriin Shaqada ugu weyn Goobta arjiga
Walnut Peptide Cunto walnut Maskax caafimaad qabta, dhakhso uga soo kabasho daal, saameyn qoyaan leh CUNTA CAAFIMAADKA
ISKUULKA DARYEELKA MAQAARKA
Digirta peat Digirta Digirta Kor u qaadida koritaanka probiotics, anti-bararka, iyo kor u qaadista difaaca jirka
Soy Peptide Borootiin Soy Soo kabso daal,
anti-qayilo, dufan hoose,
Spleen Polypeptide Beerka lo'da Hagaajinta shaqada jirka ee unugyada jirka, ka hortagga iyo yareynta dhacdooyinka cudurada neef mareenka
Dhulgariirka peptide Dhulgariirka Qalalan Kor u qaad difaaca jirka, hagaaji microcirculation, milanka xinjirowga iyo xinjirowga nadiifka ah, ilaali xididdada dhiigga
Lab Silkworm Pupa Peptide Pupa silkworm lab Ilaali beerka, hagaaji difaaca jirka, kor u qaadida koritaanka, sonkorta dhiiga oo hoos u dhacda,
cadaadiska dhiigga oo hooseeya
Maska Polypeptide Mas madow Kordhi difaaca
Habka Teknolojiyada Wax Soosaarka:
Kalluunka Maydhista maqaarka iyo jeermiska looga dhigo - enzymolysis - kala-goynta-qurxinta iyo sifaynta-sifaynta-sifaynta-ultrafiltration- fiirsashada- jeermiska-qalajinta lagu buufiyo- xirxirida gudaha- baaritaanka biraha-xirxirida dibadda- kormeerka- keydinta
Bog furahaagu ma taageerayo tags-ka fiidiyaha.
Khadka Wax Soo Saarka:
Maareynta Tayada Badeecada
Shaybaarka nalka midabkiisu ka buuxo oo buuxa waa 1000 mitir laba jibbaaran, oo loo qaybiyay aagag kala duwan oo waxtar leh sida qolka microbiology, fiisigiska iyo qolka kimistariga, qolka culeyska, aqalka dhirta lagu koriyo oo sarreeya, qolka qalabka saxda ah iyo qolka muunada. Ku qalabaysan qalab sax ah sida wajiga dareeraha waxqabadka sareeya, nuugista atomiga, chromatography lakabka khafiifka ah, falanqeeyaha nitrogen, iyo falanqeeyaha baruurta. Aasaasida iyo hagaajinta nidaamka maaraynta tayada, una gudbiya SHAHAADADA FDA, MUI, HALA, ISO22000, IS09001, HACCP iyo nidaamyo kale.
Maareynta Wax soo saarka
Waaxda maareynta wax soo saarka waxay ka kooban tahay waaxda wax soo saarka iyo aqoon isweydaarsiga waxay fulisaa amarrada wax soo saarka, iyo qodob kasta oo muhiim ah oo ka timaadda soo iibsiga alaabta ceyriinka ah, keydinta, quudinta, soo saarista, baakadaha, kormeerka iyo keydinta ilaa habka wax soo saarka maareynta iyo xakamaynta shaqaale farsamo khibrad leh iyo shaqaalaha maamulka. Qaaciddada wax soo saarka iyo nidaamka farsamada ayaa soo maray xaqiijin adag, tayada wax soo saarkuna waa mid heer sare ah oo deggan.
Hore: Badda Qajaar Badeed
Xiga: Walnut Peptide